Wholesale LC/SC/FC/ST/E2000 Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4 Optic Patch Cord Manufacturer and Supplier | Raisefiber
LC/UPC to MU/UPC Duplex Sin...
Akora manta: Corning na YOFC fibre, Us kevlar
Halavany: Halava namboarina
Cable Savaivony: 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm
Loko tariby: Aqua na namboarina
Fampiasana ny fiainana: 20 taona
Fotoana fitarihana: 3 andro
Raisefiber's 10G OM3 Duplex multimode fibre patch cable dia tariby multimode fibre (LOMMF) vita tamin'ny laser natao manokana hampiasaina amin'ny fampiharana 10 Gigabit Ethernet. Ity tariby fibre optic multimode 50/125 OM3 ity dia manana bandwidth avo dia avo, manome efa ho avo telo heny noho ny tariby fibre 62.5/125µm mahazatra. Manolotra fampisehoana nohatsaraina izy io, natao ho an'ny fifandraisana 10GBase-SR, 10GBase-LRM any amin'ny foibe data. Mandritra izany fotoana izany, ny OM3 fibre patch cable dia mifanaraka tanteraka amin'ny rafitra lova miadana kokoa amin'ny alàlan'ny optique LED na VCSEL, izay ahafahan'ny mpanjifa mampiasa fibre cabling sy rafitra rafitra ary manavao mora foana ny tamba-jotra amin'ny ho avy.
Raisefiber's OM4 multimode fiber optic patch cable dia laser-optimized, avo lenta 50µm multimode fibre (LOMMF) tariby ampiasaina amin'ny 40G/100G Ethernet fampiharana. Ity tariby patch fibre OM4 ity dia manasongadina ny bandwidth avo indrindra amin'ny 4700MHz*km, manome mihoatra ny avo roa heny ny bandwidth mihoatra ny 50/125μm 10G OM3 multimode fibre -2000MHz.km. Ny tariby fibre patch OM4 dia novolavolaina mazava ho an'ny fifindran'ny laser VSCEL ary namela elanelana rohy 40G hatramin'ny 150 metatra na elanelana 100G rohy hatramin'ny 100 metatra. Ity tariby ity dia mifanaraka tanteraka (mihemotra) amin'ny fitaovana misy anao 50/125 ary koa amin'ny fampiharana 10 Gigabit Ethernet. Ny tariby fibre patch OM4 amin'ny tariby fibre OM3 dia manome ny mpampiasa fotodrafitrasa fampiasa tsara kokoa hanohanana lavitra na fifandraisana bebe kokoa. Izy io dia manome fomba mahomby amin'ny fisorohana ny optika transceiver 40G / 100G lafo vidy.
Ny tariby fibre patch OM3 / OM4 dia novokarina tamin'ny fibre optika avo lenta sy connecteur LC / SC / FC / ST / E2000. Izy io dia voasedra mafy amin'ny fampidirana ambany sy ny fatiantoka miverina mba hahazoana antoka ny fahombiazany sy ny kalitao.
Karazana mpampitohy LC/SC/FC/ST/E2000
Isan'ny fibre Duplex Fibre Mode OM3/OM4 50/125μm
halavan'ny onjam 850/1300nm Loko tariby Aqua na namboarina
Fatiantoka fampidirana ≤0.3dB Fatiantoka miverina ≥30dB
Min. Miondrika Radius (Fibre Core) 15mm Min. Miondrika Radius (Cable Fibre) 20D/10D (Dynamic/Static)
Attenuation amin'ny 850nm 3,0 dB/km Attenuation amin'ny 1300nm 1,0 dB/km
Cable Jacket LSZH, PVC (OFNR), Plenum (OFNP) Savaivony tariby 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm
Polarity A(Tx) mankany B(Rx) Temperature miasa -20~70°C
● Ampiasaina hampifandray fitaovana izay mampiasa LC/SC/FC/ST/E2000 fomba connectors amin'ny lafiny tsirairay sy Namboarina avy amin'ny Multimode OM3/OM4 50/125μm duplex fibre tariby
● Afaka misafidy poloney PC na poloney UPC ny connectors
● Ny tariby tsirairay dia voasedra 100% ho an'ny fahaverezan'ny fampidirana ambany sy ny fahaverezan'ny fiverenana
● Lava namboarina, Savaivony tariby ary loko Cable misy
● OFNR (PVC), Plenum(OFNP) ary Setroka ambany, Zero Halogen(LSZH)
Safidy nomena naoty
● Ahena hatramin'ny 50% ny fahaverezan'ny fampidirana
● Tena mateza
● Toetran'ny hafanana ambony
● Fifanakalozana tsara
● Ny famolavolana High Density dia mampihena ny vidin'ny fametrahana
LC to LC Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4
LC to SC Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4
SC to SC Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4
SC to FC Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4
SC to ST Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4
LC mankany ST Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4
FC to FC Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4
ST to ST Multimode Duplex 50/125 OM3/OM4
Smart & azo ianteherana - Fibre Optical azo alehana
Ny connector fibre duplex standard amin'ny indostria dia mihaona amin'ny EIA / TIA 604-2 miaraka amin'ny ferrule seramika ho an'ny tambajotra fametahana haingam-pandeha.
Miondrika fibre tsy mahazaka
Ny tariby BIF dia azo fehezina sy miondrika manodidina ny zorony nefa tsy manao sorona ny fampisehoana.
7.5mm fara-tampony miondrika
Ny fampandehanana ny fiolahana dia manatsara ny fampiasana lakandrano, mamela ny fefy kely kokoa.
Ny IL sy RL tsara indrindra dia miantoka ny fifindran'ny famantarana maharitra, miaro ny fiarovana ny tambajotra.
● Ny fibre OM3 dia misy lokon'ny palitao aqua. Tahaka ny OM2, ny habeny fototra dia 50µm. Izy io dia manohana 10 Gigabit Ethernet amin'ny halavany hatramin'ny 300 metatra. Ankoatra ny OM3 dia afaka manohana 40 Gigabit sy 100 Gigabit Ethernet hatramin'ny 100 metatra. 10 Gigabit Ethernet no fampiasa matetika indrindra.
● Ny OM4 koa dia manana lokon'ny palitao aqua. Fanatsarana bebe kokoa amin'ny OM3 izany. Izy io koa dia mampiasa core 50µm saingy manohana 10 Gigabit Ethernet amin'ny halavany hatramin'ny 550 metatra ary manohana 100 Gigabit Ethernet amin'ny halavany hatramin'ny 150 metatra.
Savaivony: Ny savaivony fototra amin'ny OM2, OM3 ary OM4 dia 50 µm.
Loko Jacket: Ny OM3 sy OM4 dia matetika nofaritana amin'ny palitao Aqua.
Loharano Optical: OM3 sy OM4 matetika mampiasa VCSEL 850nm.
Bandwidth: Amin'ny 850 nm ny bandwidth modal kely indrindra an'ny OM3 dia 2000MHz*km, an'ny OM4 dia 4700MHz*km
Ahoana ny fisafidianana ny Multimode OM3 na OM4 Fibre?
Ny fibre multimode dia afaka mamindra ny halavirana samihafa amin'ny tahan'ny data isan-karazany. Azonao atao ny misafidy izay mety indrindra amin'ny fampiharana anao. Ny fampitahana ny halaviran'ny fibre multimode max amin'ny tahan'ny angona samihafa dia voalaza etsy ambany.
Karazana tariby fibre optic Fibre Cable Distance
Multimode fibre OM3 200m 550m 300m 70m 100m 100m
Karazana mpampitohy namboarina: LC/SC/FC/ST/E2000
Ireo connecteurs ireo dia mety tsara ampiasaina amin'ny rindranasa avo lenta noho ny habeny kely ary misy endrika manintona. Izy ireo dia misy amin'ny dikan-teny simplex sy duplex miaraka amin'ny ferrule zirconia 1.25mm. Fanampin'izany, ny mpampitohy LC dia mampiasa mekanika latch manokana mba hanomezana fitoniana ao anaty rack moum.
Ny SC Connectors dia connecteur tsy misy optique tsy misy fifandraisana amin'ny 2.5mm pre-radius-ed zirconia ferrule. Izy ireo dia mety tsara amin'ny fametahana tariby haingana amin'ny rack na rindrina amin'ny rindrina noho ny endrika fanosehana. Misy amin'ny simplex sy duplex miaraka amin'ny clip fitanana duplex azo ampiasaina mba ahafahana mampifandray duplex.
Izy ireo dia manasongadina kofehy vita amin'ny kofehy maharitra ary mety indrindra amin'ny fampiasana ao anatin'ny fampiharana telecoms ary mampiasa ny tsy fifandraisana optika.
Ny connectors ST na Straight Tip connectos dia mampiasa fifandraisana bayonet semi-unnique miaraka amin'ny ferrule 2.5mm. Ny ST's dia connecteur fibre optique tsara ho an'ny fametrahana an-tsaha noho ny fahamendrehany sy ny faharetany. Misy amin'ny simplex sy duplex izy ireo
Q1. Afaka mahazo baiko santionany amin'ity vokatra ity ve aho?
A: Eny, mandray santionany baiko izahay mba hitsapana sy hanamarina ny kalitao. Santionany mifangaro dia azo ekena.
Q2. Ahoana ny amin'ny fotoana hitarika?
A: Sample mila 1-2 andro, faobe ny fotoana famokarana mila 3-5 andro
Q3. Ahoana no handefasanao ny entana ary hafiriana vao tonga?
A: Matetika izahay dia mandefa DHL, UPS, FedEx na TNT. Matetika 3-5 andro vao tonga. Ny fandefasana fiaramanidina sy an-dranomasina koa tsy azo atao.
Q4: Manome antoka ho an'ny vokatra ve ianao?
A: Eny, manome antoka 10 taona ho an'ny vokatra ofisialy izahay.
Q5: Ahoana ny amin'ny fotoana fanaterana?
A: 1) Santionany: 1-2 andro.
2) entana: 3-5 andro matetika.
Kitapo PE misy mari-pamantarana hazo (azo atao ny manampy ny logo an'ny mpanjifa amin'ny marika.)
teo aloha: LC/UPC to MU/UPC Duplex Single Mode OS1/OS2 9/125μm Fiber Optic Patch Cord
Manaraka: LC/SC/FC/ST/E2000/MTRJ Multimode Duplex OM1/OM2 Optic Patch Cord
LC/UPC to MU/UPC Duplex Single Mode OS1/OS2 9/1...
LC/Uniboot to LC/Uniboot Multimode Duplex OM3/O...